सम्पत्ति र प्रमाण पत्र पनि छानविन गरिरहेका छौं– डिआइजी सिलवाल
असार १२, २०७३ आइतवार १९:३०:११ प्रकाशित
नक्कली प्रमाण पत्रका आधारमा डाक्टर बनेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पछिल्लो समय ३६ जना पक्राउ गरेको छ । हिरासतमा रहेका उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ । नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा डाक्टर बन्नेलाई कारबाही गर्ने कुरामा सहमति भएपनि पक्राउ गर्ने शैली र त्यसपछिका घटना क्रमका पक्ष र विपक्षमा बहश भइरहेको छ । स्वास्थ्य खबरपत्रिकाका वरिष्ठ संवाददाता डिबी खड्काले ब्युरोका प्रमुख डिआईजी नवराज सिलवालसँग यही विषयमा कुराकानी गरेका छन् । कुराकानीको सम्पादित अंश यस प्रकार छ :
डाक्टरको मुद्दा भएकाले नेतृत्व नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्नुपर्ने डाक्टरहरु भनिरहेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अघि लाग्नुको कारण के हो ?
केस नै हाम्रो हो । सरकारबादी मुद्दा हो । त्यही कारणले यसको नेतृत्व हामीले गरेका हौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग यो खालको कारबाही र अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन । उसले लाइसेन्स खारेज गर्न सक्छ, त्यत्ति हो । त्यसमा पनि हामी अहिले मिलेर काम गरेका छौं । सरकारले नै सिआईबीले कारबाहीको नेतृत्व गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ ।
अहिले नक्कली प्रमाणपत्रधारी भनेर समातिएकाहरुको अभियोग पुष्टि भएको छैन तर समात्दा र प्रस्तुत गर्दा अपराधिकै शैली अपनाइयो भन्ने गुनासो चिकित्सक वर्गको छ नि ?
हामीले उहाँहरुलाई अभियुक्तकै रुपमा लिएका छौं, अपराधिका रुपमा होइन । उहाँहरुले पाउने संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गरेका छौं । खानेबस्ने राम्रो व्यवस्था गरेको छौं । ट्वाइलेको राम्रो प्रबन्ध छ । उहाँहरुको परिवार र वकिललाई भेट्ने व्यवस्था गरेका छौं । कुनै खालको भेदभाव र दुव्र्यवहार गरिएको छैन । जहाँसम्म पक्राउ गर्दा दुव्र्यवहार गरियो भन्ने छ, काठमाडौं, चितवन र अन्य ठाउँमा पक्राउ गर्दा त्यस्तो कुनै कुरा आएन । वीरगञ्जमा चाहिँ केही तत्वले भूमिका खेले र त्यस्तो भयो ।
अहिले नक्कली भनेर समातियो र सार्वजनिक गरियो । बदनाम पनि भइसक्यो । तर, भोलि प्रमाणित भएन भने के हुन्छ ?
हामी असाध्यै सचेत छौं । प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गरेका र्हाैं । प्रमाणहरु जुटाएर, तथ्यहरु जुटाएर उनीहरुलाई मुद्दा चलाउन आवश्यक छ भनेर मात्रै समातेका हौं । त्यही अनुसार सार्वजनिक गरेका हौं ।
पहिले उनीहरुलाई समातियो, त्यसपछि मात्रै ‘यीनीहरुबाट कोही पीडित भए उजुरी गर्नुहोस्’ भनेर प्रमाण जुटाउन खोजियो भन्ने गुनासो पनि छ ?
‘नक्कली प्रमाणित भए लाइसेन्स रद्द गरे भइहाल्यो नि’ भन्ने उहाँहरुको तर्क छ । तर, उहाँहरुले नक्कली प्रमाण पत्रका आधारमा अर्थात् डाक्टर बन्ने आधार नै नपुगेर कति वर्ष प्य्राक्टिस गर्नुभयो ? त्यो बिचमा कति मान्छे पीडित भए होलान्, कति ठगिए होलान् । त्यो हिसाबकिताब राज्यले राख्छ । प्रेस विज्ञप्तिमा हामीले त्यही कुरा उल्लेख गरेका हौं । नक्कली प्रमाण पत्रका आधारमा डाक्टर बनेर २० वर्षसम्म उहाँले कतिलाई ठग्नुभयो, घर बनाउनुभयो, मेडिकल कलेज खोल्नुभयो । अहिले आएर ‘भोलिदेखि काम गर्दिनँ, लाइसेन्स खोस्नुहोस्’ भनेर सुख पाइन्छ ? डाक्टर बनेर झुक्याएर सम्पत्ति कमाएकाले र सर्वसाधरण ठगेकाले त्यसको हिसाबकिताब राज्यले राख्छ ।
उनीहरु माथि सर्वसाधारण उजुरी गरे त ?
सबैको त होइन, केहीका उजुरी आएका छन् ।
नक्कली प्रमाण पत्र रहेको टुंगो लागेपछि उनीहरुमाथि कुन–कुन मुद्दा चल्छन् ?
डाक्टरले बनेर उनीहरुले कमाएको सम्पत्ति र गरेको क्षति हेरिन्छ । त्यो अनुसार नक्कली प्रमाण पत्रका आधारमा आफूलाई डाक्टर भनेर उपचार गर्दा गरेको ठगी, सरकारी अस्पतालमा काम गर्नेलाई भ्रष्टाचार पनि र नेपाली कलेजबाटै पढेकालाई किर्ते मुद्दा लाग्छ ।
अनुसन्धान आएएससीको सर्टिफिकेटमा केन्द्रीत छ कि त्यो भन्दा माथिका प्रमाणपत्र पनि हेरिन्छ ?
हामी त्यो भन्दा माथिका पनि हेरिरहेका छौं ।
नक्कली त २ हजार, ३ हजार कति छन् भनेर बाहिर आइरहेको छ । खाशमा कति जना डाक्टरमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ?
दुई, तीन हजार त अनुमान हो, मान्छेको । यो असली चिकित्सक समुदायको मनोबल घटाउने वा हतोत्साही बनाउन गरिएको हल्ला पनि हो । तर, पक्राउ परेका बाहेक पनि केही माथि अनुसन्धान भएर नक्कली प्रमाणित भइसकेको छ । उनीहरु पक्राउको प्रक्रियामा छन् । त्यसैले जो सही डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँहरुले हतोत्साही हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । हामी उहाँहरुकै क्षेत्रमा रहेका विकृति बढार्दैछौं । त्यसैले शशंकित पनि हुनुपर्दैन । विशेष गरी जति नक्कली छन्, उनीहरुलाई थाहा छँदैछ । हामी त भन्छौं, नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरुले आफैंले आत्मसमर्पण गरिदिए राम्रो हुन्छ ।
तपाईंले समातेका मध्ये केही व्यक्तिको राज्यका माथिल्ला निकायमा रहेका व्यक्तित्वहरु सँगै सम्बन्ध रहेको खालका कुरा आइरहेका छन् । त्यतातिरको दबाब कत्तिको छ ?
हामीले को कुन पार्टीको हो, कोसँग सम्बन्ध छ, कसको छोरा वा भाई हो ? केही चिन्दनौं । त्यसैले दबाब आएको पनि छैन र आउँदैन पनि ।